Dumar Somali ah oo xukunno dheer lagu xukumay Maraykanka. – Radio Daljir
Dumar Somali ah oo xukunno dheer lagu xukumay Maraykanka.
Maajo 17, 2013 5:59 b 0
Minnesota, May, 17 – Dumarkaan oo ah labo hooyo islamarkaasina ku eedeysnaa inay xiriir iyo tageero siin jireen kooxaha islaamiyiinta Soomaaliya ee lagu magacaabo Al-shabaab ayaa asbuucyadii lasoo dhaafay maxkamadayntoodu kasocotey dalka Mareykanka.
Haweenkaan oo laxukumay maalintii Khamiista ayaa waxaa ka horeeyey dhalinyaro badan oo Soomaali ah, kuwaasi oo loohaystay dacwad lamid ah mida gabadhahaan lagu soo eedyey ayaa gabi ahaantoodba lawada xukumay, waxaana la oran karaa labadaan dumarka ah oo lagu kala xukumay 20 sano iyo 10 sano waa dumarkii ugu horeyey ee Soomaaliyeed oo tuhun ciqaabtiisu intaas dhan tahay xabsi ku mutaysta.
Aamino Faarax Cali waxay ka mid tahay haweenka lagu riday xukunnada kala duwan, waxaana da? ahaan ay jirtaa 36 sano, Aamina ayaa waxaa xukunkeedu uu noqday 20 sano oo xarig ah, waxaana lagu soo eedeeyay 13 dambe oo la xiriira arrimo argagixisonimo. Sidoo kale Xaawo Maxamed Xassan oo da?deeda lagu sheegay 66-sano jir ayaa waxaa lagu soo eedeeyay 1 dambi oo la xiriira arrimo argagixisinimo, waxaana lagu xukumay ciqaab gaaraysa illaa 10 sano oo xarig ah.
Xukunkaan oo in muddo ah dacwadiisa iyo baaritaankiisu soosocdeen ayaa u muuqda midey Dowladda Mareykanka guul ka gaartay inkastoo dadka Soomaalida ah ee ku nool gobollada dalka Mareykanka inta badan u arkeen arrin layaab-leh haddana mamuuqato kadaba tag iyo racfaan ay illaa hadda qaateen ama dadaaladoodu ka muuqdaan meesha.
Dadka Soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa inta badan lagu eedeyaa inay ku lug leeyihiin qalalaasaha diimeed ee kasocda Soomaaliya, ?islamarkaasina looga soo horjeeddo siyaasadaha reer galbeedka waxaana jira dabagalo iyo dacwado inta badan lagu soo oogo Soomaalida, falkaan waa kii ugu dambeeyey waxaana jirey Soomaali kala duwan oo sanadihii u dambeyey lagu eedeynayey dacwadahaan laxiriira ururo diimeedka ka jira Soomaaliya.
Idle Moallim Omar.